(Waxaa laga soo toosiyay Sacuudi carabiya)
Sacuudiga ama Boqortooyada Sacuudi Carabiya (Af-Carabi المملكة العربية السعودية ) waa wadan muslin ah oo ku yaala qaarada Aasiya, gaar ahaan mandiqada bariga dhexe. waxayna xad lawadagtaa, wadamada Ciraaq, Urdun, Kuweyt, Qatar, Baxrayn, Yemen iyo Imaaraatka carabta. Waxaa kale oo xad lawadaagaa Gacanka faarisiga, oo kaga beegan dhinaca Woqooyi Bari iyo Baddacas oo Galbeedah dadka sucuudiga tiradooda waxaa lagu qiyaasaa, in ka badan 27 miliyan oo qof, Boqortooyada waxaa yimaada sanadkii in la badan 2 milyan oo ruux Sacuudi Carabiya (/ ˌsɔːdi əreɪbiə / (ku saabsan dhawaaqa maqalka), / ˌsaʊ- / (ku saabsan codkan maqal); Carabi: السعودية as-Su'ūdiyyah ama as-Sa'ūdiyyah), si rasmi ah Boqortooyada Saudi Arabia (KSA ; Arabic: المملكة العربية السعودية al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Su'ūdiyyah, ku saabsan codkani (caawimaad · info)}}}, waa dal ku yaal galbeedka Aasiya oo ka kooban qaybta jasiiradda Carabta. Sacuudi Carabiya ayaa ah gobolka ugu weyn ee madaxbannaan ee Bariga Dhexe, oo ah juqraafi ahaana shanaad ee ugu weyn Asia, tan labaad ee dunida Carabta ka dib Algeria iyo 12 -aad ee adduunka ugu weyn. . Sacuudi Carabiya ayaa xuddun u ah Jordan iyo Ciraaq waqooyi, Kuwait ilaa waqooyi bari, Qadar, Bahrain iyo Imaaraadka Imaaraadka Carabta xagga bari, Oman ilaa koonfur iyo yemen xagga koonfureed. Waxaa laga soocay Israel iyo Masar by Gacanka Cadaba. Waa waddanka keliya ee leh xeebta Badda Cas iyo xeebta Gacanka, oo badi dhulkeeda waxay ka kooban tahay lamadegaan, dhul hoose iyo buuro. Sacuudi Carabiya waa dhaqaalaha ugu weyn ee Bariga Dhexe ilaa Oktoobar 2018 iyo 18aad ee adduunka ugu weyn.  File
Diinta labaad ee adduunka ugu weyn , Islaam, ayaa ka soo baxay maalinta casriga ah ee Sacuudi Carabiya. Horraantii 7aad, Nabiga Islaamka wuxuu midoobey dadweynaha Carabta isla markaana abuuray nidaam diimeed oo Islaami ah.  Kadib markii uu geeriyooday 632, taageerayaashiisa si degdeg ah ayey u balaariyeen dhulka xukunka Muslimka ee ka baxsan Carabta, oo ka adkaaday dhulalka waaweyn ee dhulalka ah (laga bilaabo Iberian Peninsula ee galbeedka ilaa maalinta casriga ah ee Pakistan ee Bariga). Carabta oo ka soo jeeda waqooyiga Suudaan taariikhda casriga ah waxay aasaaseen Rashiidun (632-661), Umayyad (661-750), Abbasid (750-1517) iyo Fatimid (909-1171) Khaliifad iyo sidoo kale dhulal badan oo kale oo Asia ah, Afrika iyo Europe.     File
Deegaanka Sacuudi Carabiya wuxuu hore u ahaan jirey afar gobol oo kala duwan: Hejaz, Najd iyo qaybo ka mid ah Bariga Carabta (Al-Ahsa) iyo Koonfurta Carabta ('Asir')  Boqortooyada Sacuudi Carabiya waxaa aasaasay sannadkii 1932 by Ibn Saud. Waxa uu ku biiray afartan gobol hal waddan iyada oo loo marayo qabsashooyin taxane ah oo laga bilaabo 1902 la qabsaday Riyadh, oo ah aabaha gurigiisa oo ka tirsan qoyskiisa, House of Saud. Sacuudi Carabiya ayaa tan iyo markii uu ahaa boqortooyo baddan, si wax-ku-ool ah oo kali-talisnimo ah loo maamulay khadadka islaamka.   Dhaqdhaqaaqa diiniga ah ee Wahhabi ee kuyaal Sunniga Islaamka waxaa loo yaqaan "muhiimada ugu muhiimsan ee dhaqanka Sacuudiga"
Re Salmān, sovrano dal 2015 (2013)
3 Waddanmaha Degaan Saudi Arabia
6 Sido kale Fiiri
Sacuudiga waxee ka mid tahay wadamada Adoonta lahaan jirtay, wadanka sacuudiga waxaa la sameeyay sanadka marka oo ahaa 1902, ninka sameeyay waxa uu ahaa Ibn Sacuudi, waxaana boqortooyada Sacuudiga noqday sanadka marka oo ahaa 1932, cabdul casiis wuxuu dhalay caruur ka badan 50 ruux. Waxaana markii ugu horeesay dhaxlay boqortooyada Wiilkiisa sanadka marka uu ahaa. 1964 kii. Magaciisana waxaa la dhihi jiray (Faysal bin Cabdul Casiis Al sacuudi) wuxuuna bilaabay in uu keeno adoomo. wuxuuna sacuudiga ka abuuray goobo waxbarasho.Sida iskuulo iyo meelaha kale ee cilmiga diiniga lagu barto iyo goobo caafimaad.Sida isbitaalada. Siyaasiyiinta wadanka sacuudiga ma eesan jeclaan jirin siyaasada wadamada reer galbeedka Sida wadanka ingiriiska(English) iyo wadanka kale ee maraykanka(america) Markii uu bilaawday Dagaalkii Gacanka oo u dhaxeeyay Qaramada Midoobay(QM) iyo wadanka Ciraaq sanadka marka uu ahaay 1991, sacuudiga waxee militari soo dhoobtay xuduudkeeda, isla markaas sacuudiga waxaa lagu soo weeraray sawaariiq waxeena ku dhaceen magaalada (Riyaad) ee caasimada wadanka sacuudiga Waqtigaas kadib sacuudiga waxuu saaxiib fiican la noqday wadanka mareykanka(america) Boqorkii sacuudi carabiya ee 《Fahad bin Cabdul Casiis Al Sacuudi》 waxuu ahaan jiray boqor iyo raiisul wasaare oo loo doortay sanadka marka uu ahaa 1982 kii waxuuna dhintay sabadka marka uu ahaa 2005 tii Kadibna waxaa bedelay Cabdullahi bin Cabdul Casiis Al Sacuudi. File
Sacuudi Carabiya waxay ku dhawaad ​​80% Jasiiradda Carabta (Xuduudaha ugu weyn adduunka),  oo u dhaxeeya waddooyinka u dhaxeeya 16 ° iyo 33 ° N, iyo dhererka 34 ° iyo 56 ° E. Sababta oo ah xuduudaha koonfureed ee waddanka Imaaraadka Carabta iyo Oman ma aha mid si sax ah loo calaamadeeyay, cabbirka saxda ah ee waddanka lama yaqaan.  Caqabada CIA ee dunidu waxay ku qiyaastay 2,149,690 km2 (830,000 sq mi) iyo liisaska Sacuudi Carabiya oo ah gobolka 13aad ee ugu wayn dunida.  Waa juquraafi ahaan waddanka ugu weyn ee Qaadka Carbeed. 
Juqraafiyada Sucuudigu waxay ku badan tahay xeebta Carbeed, oo la xidhiidha semi-lama-degaanka iyo geed-geedka (eeg muuqaalka dayax-gacmeedka) iyo dhowr buurood iyo goobo dhaadheer. Xaqiiqdii, waxaa jira tiro ka mid ah loola xiriiriyey oo ay ku jiraan 647,500 km2 (250,001 sq m) Rub 'al khali ("Quarter Boos") oo ku yaalla qaybta koonfur bari ee dalka, xeebta aduunka ee ugu weyn ee cagaaran  [ 295] Waxaa jira harooyin yar oo dalka ka mid ah laakiin aan lahayn wabiyada joogtada ah, si kastaba ha ahaatee wadada ayaa aad u badan. Meelaha bacrin ah waa in laga helaa kaydka alaabooyinka dhulka, basaska, iyo oases.  Muuqaalka ugu muhiimsan ee ugu muhiimsan waa bareegga dhexe ee ka soo baxa Badda Cas oo si tartiib ah ugu soo degaya Caddaanka iyo Gacanka Ciraaq. Xeebta Badda Cas, waxaa jira cirif dhuxul ah, oo loo yaqaan Tihamah barbar socda taas oo ku socota dabagal balaadhan. Gobolka Koonfur galbeed ee Asir waa buuro, waxaana ku jira 3,133 m (10,279 ft) Buur Sawda, oo ah meesha ugu sarraysa dalka. 
Marka laga reebo gobolka koofur galbeed ee Asir, Sacuudi Carabiya waxay leedahay cimilo cilad ah oo leh heerkul aad u sarreeya iyo heerkulka khafiifka ah ee habeenkii. Heerkulka xagaaga ee celceliska heerkulkiisu waa 45 ° C (113 ° F), laakiin wuxuu noqon karaa mid u sareeya 54 ° C (129 ° F). Xilliga jiilaalka heerkulku wuxuu yareeyaa 0 ° C (32 ° F). Guga iyo dayrta kuleylku waa diirimaad, heerkulka celcelis ahaan qiyaastii 29 ° C (84 ° F). Roobka sannadlaha ah ayaa aad u hooseeya. Goobta Asir waxay ku kala duwantahay in ay saameyn ku yeelato maraakiibta Hindiya, inta badan waxay dhacaan inta u dhexeysa bilaha Oktoobar ilaa Maarso. Celcelis ahaan 300 mm (12 in) oo ah roobabku waxay dhacaan muddadan, taas oo qiyaastii 60% roobabkii sanadlaha ahaa 
Waddanmaha Degaan Saudi ArabiaEdit
United States 80000+
South Korea 5000+
Duurjoogta waxaa ka mid ah Leopard Carbeed,   Jahannamo, Dhallinyaro, Dhoobleey, Koontooyin, Gaadhi, bisad ciid, iyo jerboa. Xayawaanka sida xayawaanka, oryx, leopards iyo cheetahs  waxay ahaayeen kuwo badan illaa qarnigii 19aad, markii xayawaan ballaadhan ay hoos u dhigtay xayawaankan. Shimbiraha waxaa ka mid ah falcons (oo la qabto oo loo tababaray sidii loo ugaadhsiin lahaa), gorgortanka, maqaarka, waraaqaha, qashinka, iyo bulubyada. Waxaa jira noocyo kala duwan oo abeesooyin ah, kuwaas oo intooda badani yihiin kuwo qarxa. Sucuudi Carabiya waxay ku nooshahay nolol aad u qoto dheer. Deegaanka Badu-yo gaar ahaan waa nidaam hodan ah oo kala duwan. In ka badan 1200 nooc oo kalluun  ayaa laga diiwaangeliyey Badda Cas, 10% oo ka mid ah kuwaan ayaa laga helaa meel kale.  Tani
2 Northern Region KSA Arar
6 Riyadh Riyad
7 Ach-Charqiya Dammam
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Sacuudi_Carabiya&oldid=216480"
Last edited on 9 Sebteembar 2021, at 17:06
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Sebteembar 2021, marka ee eheed 17:06.